I-China IECEE- Inkonzo ye-CB kunye noVavanyo |MCM
▍Yintoni iSatifikethi se-CB?
I-IECEE CB yinkqubo yokuqala yokwenyani yamazwe ngamazwe yokwamkelwa ngokufanayo kweengxelo zovavanyo lokhuseleko lwezixhobo zombane.I-NCB (i-National Certification Body) ifikelela kwisivumelwano samazwe amaninzi, esenza ukuba abavelisi bafumane isatifikethi sesizwe kwamanye amazwe angamalungu phantsi kwe-CB scheme ngesiseko sokudlulisa esinye sezatifikethi ze-NCB.
Isatifikethi se-CB luxwebhu lwesikimu se-CB esisemthethweni esikhutshwe yi-NCB egunyazisiweyo, ekwazisa enye i-NCB ukuba iisampuli zemveliso ezivavanyiweyo ziyahambelana neemfuno ezisemgangathweni.
Njengohlobo lwengxelo esemgangathweni, ingxelo ye-CB idwelisa iimfuno ezifanelekileyo ukusuka kumgangatho we-IEC ngento nganye.Ingxelo ye-CB ayinikezi kuphela iziphumo zazo zonke iimvavanyo ezifunekayo, ukulinganisa, ukuqinisekiswa, ukuhlolwa kunye nokuhlola ngokucacileyo kunye nokungacacisi, kodwa kubandakanywa neefoto, umzobo wesiphaluka, imifanekiso kunye nenkcazo yemveliso.Ngokomgaqo weskim se-CB, ingxelo yeCB ayizukusebenza de iveze nesatifikethi seCB kunye.
▍Kutheni sifuna iSiqinisekiso se-CB?
Ngqolyukuqondazed or vumaedngeilunguamazwe
Ngesatifikethi se-CB kunye nengxelo yovavanyo lwe-CB, iimveliso zakho zinokuthunyelwa kumazwe athile ngokuthe ngqo.
Guqulela kwamanye amazwe izatifikethi
Isatifikethi se-CB sinokuguqulwa ngokuthe ngqo kwisatifikethi samazwe angamalungu ayo, ngokubonelela ngesatifikethi se-CB, ingxelo yovavanyo kunye nengxelo yovavanyo lokwahlukana (xa kufanelekile) ngaphandle kokuphinda uvavanyo, olunokunciphisa ixesha eliphambili lokuqinisekiswa.
Qinisekisa uKhuseleko lweMveliso
Uvavanyo lwesatifikethi se-CB luqwalasela ukusetyenziswa okufanelekileyo kwemveliso kunye nokhuseleko olubonakalayo xa lusetyenziswa kakubi.Imveliso eqinisekisiweyo ingqina ukuba iyanelisa iimfuno zokhuseleko.
● Isiqinisekiso:I-MCM yeyokuqala egunyazisiweyo ye-CBTL ye-IEC 62133 isiqinisekiso esisemgangathweni yiTUV RH kwilizwe laseTshayina.
● Isatifikethi kunye namandla okuvavanya:I-MCM iphakathi kwepatch yokuqala yovavanyo kunye nesiqinisekiso somntu wesithathu kumgangatho we-IEC62133, kwaye igqibe ngaphezu kwe-7000 yokuvavanya ibhetri ye-IEC62133 kunye neengxelo ze-CB kubathengi behlabathi.
● Inkxaso yobugcisa:I-MCM ineenjineli ezingaphezu kwe-15 zobuchwephesha ezikhethekileyo kuvavanyo ngokomgangatho we-IEC 62133.I-MCM ibonelela abathengi ngolwazi olubanzi, oluchanekileyo, oluvaliweyo lwenkxaso yobugcisa kunye neenkonzo zolwazi oluphambili.
Okulandelayo: UMntla Merika-CTIA
Ixabiso leSatifikethi se-Iecee
Inkqubo yeSiqinisekiso se-Iecee
Inkonzo yeSiqinisekiso se-Icee
Iecee Ixesha lokukhokela
Iecee Amaxwebhu Technical
Iecee iMfuneko yobuGcisa
Izinto zoVavanyo ze-Iecee
Indlela yoVavanyo ye-Iecee
Ingxelo yoVavanyo lwe-Icee
ILabhoratri yoVavanyo ye-Iecee
Iecee Uvavanyo Ixabiso
Inkonzo yoVavanyo ye-Iecee
Ixesha loVavanyo lwe-Iecee